I-ECO-House kwiLake Stęszewko
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMagda
Le ndlu ikwiLake Stęszewko kwihlathi laseZielonka. Amanqanaba amabini, ikhitshi ehlukeneyo kunye negumbi lokuhlambela, i-terrace ene-barbecue, ikhululekile; I-WiFi, iTV, iibhayisekile, kunye nokufikelela kwi-ECO-beach. Iimeko ezintle zokuloba, ukubheqa. Indawo ebiyelweyo, izilwanyana zasekhaya zamkelekile. Ihlathi, iNdalo kunye neChibi !!!
YiNdawo yokuThula, i-200 m ukuya echibini kumgca othe ngqo.Uhambo lwemizuzu eyi-15 lunxweme olunebala lokudlala kunye nezixhobo zamanzi ezirentwayo. Kukho iziko lokukhwela amahashe kunye nesikhululo seenqwelomoya saseBednary esinomkhondo womdyarho kwindawo ekufutshane.
Ngaphantsi kukho igumbi elibanzi elinomatshini wokuhlamba, i-dishwasher kunye nokufikelela kwi-terrace apho unokwenza i-grill, egadini kukho i-deckchairs kunye ne-sandpit yabantwana. Phezulu kukho indawo yokuphumla enendawo yomlilo, iTV, imidlalo kunye negitare, apho unokuchitha ubusuku kunye, kungakhathaliseki ukuba imozulu injani.
Umbuki zindwendwe ngu- Magda
Ukunikezelwa kwezitshixo ngaphandle kokuqhagamshelana - kukhuselekile. Ukubulala iintsholongwane kwezibambo kunye nezibambo emva kokuhlala ngakunye.